Chibvumirano chekutengesa pakati pevanhu, nemuenzaniso wakajeka | Ehupfumi Zvemari
Tengesa chibvumirano pakati pevanhu
Susana Maria Urbano Mateos | | Musha, nzvimbo yekugara
Chibvumirano chekutengesa pakati pevanhu muSpain, inotsanangurwa zvinoenderana nezvakapihwa muchinyorwa 1445 cheCivil Code. Iyo inosimbisa kuti chibvumirano umo mune zvisungo zvekudzosera mapato maviri anobvumirana. Mune urwu rudzi rwechibvumirano, mutengesi anosungirwa kuendesa chimwe chinhu, nepo pachikamu chake, mutengesi anosungirwa kubhadhara mumwe mutengo, kungave nemari, kana chikwangwani chinomiririra icho.
1 Hunhu hwechibvumirano chekutengesa
2 Ndezvipi zvinhu zviri muchibvumirano chekutengesa pakati pevanhu?
2.3 Kuendesa muridzi
4 Chibvumirano chekutengesa pakati pevanhu chinoitwa sei?
5 Zvinorevei kumiswa kwechibvumirano chekutengesa?
6 Kufunga kwekupedzisira
Hunhu hwechibvumirano chekutengesa
Munhoroondo yese, iyo kutengeswa kwave kuri chimwe chezvinhu zvakakosha zvechibvumirano, nekuti kuve chishandiso chepamutemo chinoshandiswa kuita kutengeserana kwenhumbi, ine kukosha kwakanyanya muhurongwa hwehupfumi hwevanhu. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti kudzora kwechibvumirano chekutengesa muCivil Code chakakura uye chinoshomeka mune zvehunyanzvi mazwi. Nekuda kwenguva iyo iyo Civil Code yakanyorwa, zvizhinji zvezvinhu zvakakosha zvakatemwa mukodhi ino zvinotorwa sechinhu chekare kana icho chakatoitika uye nehunhu husina basa.
Vamwe ve hunhu hwechibvumirano chekutengesa pakati pevanhu vanosanganisira:
Icho chinyorwa chakazvimiririra nekuti hachitsamire pane zvimwe zvibvumirano
Pamusoro pezvo, zvinosungirwa nekuti zvinodzokorora zvisungo: kune rumwe rutivi, mutengesi anofanira kutengesa chivakwa kana chivakwa, nepo kune rimwe racho, mutengi anofanira kubhadhara mutengo wabvumiranwa.
Ichi chibvumirano chekutengesa ndechekufungisisa, ndiko kuti, kune hupfumi kana shanduko yemhuri pakati peavo vanobatanidzwa semhedzisiro yezvisungo zvakasimbiswa.
Kwete izvozvo chete, zvakare chibvumirano chekubvumirana, saka zvinodikanwa kuti mapato ese abvumirane.
Chibvumirano chekutengesa chinozivikanwawo nekuve nefomu yemahara, zvinoreva kuti inogona kuitiswa nekunyora kana nemuromo, kunze kwekunge zvasvika pakutengesa imba, muchiitiko icho chibvumirano chinofanira kuitwa nekunyora .
Chibvumirano chekutengesa zvakare chinoshanduka, saka pane chisungo chekubhadhara mutengo wevatengi, pamwe nechisungo chekuendesa chinhu chemutengesi, zvinhu zviviri izvo zvakaenzana zvakaenzana. Ichi chinhu chakakosha nekuti chinodikanwa kusiyanisa izvo zvakafananidzwa zvekutengesa zvinoshandiswa kuviga zvipo mukubiridzira kubva kune vane chikwereti.
Ndezvipi zvinhu zviri muchibvumirano chekutengesa pakati pevanhu?
Zvinyorwa zvechibvumirano chekutengesa pakati pevanhu zvine zvemutemo uye zvemutemo zvirimo, sezvo chibvumirano chayo chakabatanidzwa mukati mechikamu chezvibvumirano zvinotsanangurwa seyakajairwa kana akasarudzwa. Nenzira iyi, chinhu chinogona kuitika chinotsanangurwa, pamusoro pekutsanangura hunhu hwemutengo uye zvakare kugadzirisa zvese izvo zvisungo zvinomuka kune avo vanobatanidzwa.
Izvo zvakakosha kujekesa iwo akati mutemo kazhinji unosanganisira seti yemitemo ine mutero uye kuti vanokonzeresa kusiyiwa vachitarisa musimboti wekuzvitonga kwechido, icho kazhinji chinoumba zvinhu zvinofungidzirwa, zvisinei nekuti avo vanobatanidzwa havataure nezvazvo, izvo zvinogona kubviswa kana kugadziridzwa pakuda zvikamu.
Mune zvimwe zviitiko, zvinosungirwa tsika dzinovambwa dzisingakwanise kubviswa kana kuchinjwa pakuda kweavo vanobatanidzwa. Kunyangwe izvi, ivo vashoma mumufananidzo wechibvumirano, sezvinoitika mumutemo wega.
Ava ndivo vanobata vane kodzero mbiri uye zvekudzosera zvisungo. Panyaya yechibvumirano chekutengesa, zvidzidzo zvinotorwa semutengi uye ane chikwereti. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti hapana kana mamiriro ezvinhu anofanirwa kusiiwa mazita ezvidzidzo muchibvumirano chekutengesa.
Mune chibvumirano chekutengesa chinhu chinhu kana zvinhu izvo zvichaendeswa kuburikidza nehupfumi mashandiro. Zvinhu zvakataurwa zvinogona kuve zvinhu kana kusabatanidzwa.
Corporal kana isingabatanidzi. Izvi zvinoreva kuti, inofanira kunge isina basa kana chibvumirano chiine sechinhu chayo, chimwe chinhu chinooneka kana kana, zvinopesana, chichiita nekodzero isiriyo.
Parizvino kana ramangwana. Mune ino kesi, nekuti iyo yazvino midziyo kana neimwe nzira, kondirakiti inogona kunge iine ramangwana pfuma sechinhu chayo.
Kunze kwekuve mumwe weiyo zvinhu zvakakosha zvechibvumirano, Ichowo chimwe chezvisungo zvakakosha zvinopihwa mairi. Naizvozvo, zuva iro kuchinjiswa kweiyo pfuma kana nhumbi ichaitwa inofanirwa kuiswa muchibvumirano chekutengesa. Nenzira iyi, yega yega yega yezvisungo zvekuwana zvichafanirwa kuregererwa.
Chinhu ichi mu kondirakiti yekutengesa iri futi chimwe chezvisungo zvakakosha, saka iyo huwandu inofanirwa kumanikidzwa kuisirwa muchibvumirano. Mutengo wekubhadhara zvakare unofanirwa kuve wechokwadi uye unotaridzika. Inofanira kunge iine mari kana chiratidzo chinomiririra. Kana chinhu chakakosha chikasasangana, ipapo mabhenefiti evaya vanobatanidzwa mukuunzwa kwechimwe chinhu chingave chekutengeserana.
Izvo zvakakosha kujekesa kuti muchokwadi hazvina kukosha kududza huwandu hwemari panguva iyo chibvumirano chakaitwa zviri pamutemo, sekureba sekutsunga kwehuwandu kuchisara kune yakasununguka yeimwe yemapato. Kune rimwe divi, kana iko kusarudzika kwemari ichabhadharwa iri sarudzo yemunhu wechitatu uye zvisina kutaurwa panguva yekutora danho, chibvumirano hachizoshanda.
Panguva ino zvinofanirwa kutaurwa kuti iyo wechitatu munhu achaita zvinoenderana nekuenzanaNekudaro, yako sarudzo inogona kupokana kana usati washandisa mutemo uyu. Chimwe chinhu chakafanana chinoitika kana iye munhu wechitatu asina kutevera zvinongedzo zvakagadzwa nemapato ese ari muchibvumirano.
Chibvumirano chekutengesa pakati pevanhu chinoitwa sei?
Chinangwa chekugadzira chibvumirano chekutengesa pakati pevanhu zvine chekuita nenyaya yekuti zvese zvinhu zvechibvumirano cherudzi urwu zvinofanirwa kunge zvichinyorwa, kureva kuti, zvidzidzo, chinhu, mutengo uye zvisungo.
Kana uchitanga ne kunyora kwechibvumirano chekutengesaZvese zvinotanga nemusoro wegwaro uye zvichidaro kuzivikanwa kweumwe neumwe wemapato. Izvo zvinodikanwa kudoma zita, chitupa, pamwe nekero yemutengi uye mutengesi.
Tevere, chivakwa kana chinhu chinofanirwa kuchinjiswa chinotsanangurwa zvakadzama sezvazvinogona. Panyaya yeimba yekutengesa zvivakwa, mutoro unozobva wakurisa nekuti masevhisi ese, mvura, tsvina, pakati pevamwe, zvichafanirwa kudomwa, pamwe nekutsanangudza mamiriro ari midziyo.
Mushure mezvataurwa pamusoro apa, zvese zvinosungirwa muchibvumirano zvinofanirwa kutsanangurwa, zvinosanganisira, kuchinjirwa kwezvakanaka uye mubhadharo wemutengo wezvakanaka. Nezve kuchinjiswa kwemidziyo, chibvumirano chinofanira kunyatso kumisa musi uchaunzwa chivakwa. Nekuremekedza kubhadhara kwemutengo wevakanaka, Izvo zvinodikanwa kudoma huwandu hwemutengo wezvakanaka, pamwe nenzira yekubhadhara.
Chekupedzisira, chibvumirano chinofanirwa kusainwa nevaya vanobatanidzwa uye, kana zvichidikanwa, vochisimudzira kugwaro revanhu.
Zvinorevei kumiswa kwechibvumirano chekutengesa?
Iyo ipfungwa inounzwa mushure mekunge chero chikonzero chekugadzirisa chaunzwa. Kusiyana nezvinoitika nekushaya maturo, iyo Civil Code haina kudzora zvikonzero zvine chekuita neiyo resolution yechibvumirano.
Kuita kwesarudzo Iri ibasa remukweretesi uye nekudaro, chikonzero chakajairika chekubviswa kwechibvumirano ndiko kusazadzikiswa kwechero chipi chezvisungo zvakatorwa muchibvumirano chaicho. Muchiitiko chekuti chibvumirano chekutengesa chisingaitwe nekuda kwekusabhadhara, ipapo mukweretesi anozove nekodzero yakakwana yekukumbira muripo zvichienderana nezvakapihwa neCivil Code.
Iko kune zvakare mukana wekuti chimwe chikonzero chekumisa chinomuka apo kutengesa kwacho kunoitwa pane semuenzaniso hwaro. Kana izvi zvikaitika, ipapo mukweretesi anozove nekodzero yekumisa kontrakiti yakati kana zvatemwa kuti mhando yezvakanaka inosiyana neiya inopihwa muyenzaniso.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti takatsanangura nzira iyo a chibvumirano chekutengesa pakati pevanhu, zvinhu zvekusanganisira uye zvisungo zvebato rega rega rinobatanidzwa, izvi hazvireve kuti gweta rinofanira kupihwa. Chinhu chinonyanya kurairwa kutendeukira kugweta uyo ari nyanzvi muzvibvumirano zvekutengesa kuitira kuti agadzirise kusahadzika kupi nekupi uye nekupa rairo kwete chete maererano nekunyorwa kwavo, asiwo zvimwe zviri pamutemo.
(Yakabatanidzwa faira) Muenzaniso wechibvumirano chekutengesa mushoko
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Savings » Musha » Tengesa chibvumirano pakati pevanhu
Mbishi zvigadzirwa mune zvekudya: imwe nzira kune mari